September 2017 – Hsu Myat Moe
Who Are You To Complain?
ဒီရက်ပိုင်းမှာ Trans Siberian အပိုင်း ၈ ပိုစ့်မတက်နိုင်တဲ့အပြင် ပိုကြာဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတယ် ။ ဘာလို့ဆိုတော့ ၂ လ ကျော်ကြာ pending ဖြစ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ EP က ရုတ်တရုတ် Approve ဖြစ်ပြီး …. အလုပ်သွားနေရလို့ပါပဲ ။ ဒါ့အပြင် အလုပ်နဲ့ အိမ်နဲ့ ကတော်တော်ကိုဝေးတာ..၉ နာရီ အလုပ်ကိုရောက်ဖို့ မနက် ရ နာရီကနေ အိမ်က ထွက်ရတယ် ။ တစ်နေ့ကို အသွား ၂ နာရီ အပြန် ၂ နာရီကြာပါတယ် ။ ရထား ၂၂ မှတ်တိုင်စီးရပြီး […]
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို, အမှတ်တရများ, အတွေးတစ်စ
ခိုင်းတာလုပ်တတ်တဲ့ စက်ရုပ်တစ်ရုပ် တွေးတောဥာဏ် ဖြန့်ကျက်စဉ်းစားမှု နတ္တိ ဘ၀ဟာ instruction အပြည့်ပါတဲ့ manual တစ်အုပ် update မရှိ ၊ upgrade ကင်းမဲ့ နေသားကျနေတဲ့ instruction တွေအောက်မှာ ယိုင်နဲ့တဲ့ infrastructure ထွက်ပေါက်မဲ့နေတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ ထိုင်ဆိုထိုင် ထဆိုထ version နိမ့်လူသား စက်ရုပ် ။ photo credit – Business Insider
Trans Siberian ခရီးစဉ်-၇
အရင်ပိုစ့်တွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲ ကားက မနက် ၇ နာရီခွဲမှာ အူလန်ဘာထော Dragon Center ကနေထွက်ပြီးတော့ Ulan Ude မြို့ကို ကို ည 8:30 မှာရောက်မှာပါ ။ Ulan Ude နဲ့ အူလန်ဘာထောက time zone တူတာမို့ အချိန်ကွာခြားချက်မရှိပါဘူး ။ ကားပေါ်မှာ စုစုပေါင်း ကြာချိန်ကတော့ ၁၂ နာရီ ထိုအထဲမှာမှ ကားမောင်းတဲ့အချိန်က ၈ နာရီ ၊ border ဖြတ်တဲ့အချိန်က ၂ နာရီ ၊ lunch break နဲ့ toilet […]
30 Days Writing Challenge (Things that make you happy)
30 Days Writing Challenge (Describe your personality)
Archives Select Month January 2021 (2) November 2020 (1) November 2019 (1) October 2019 (1) February 2019 (1) January 2019 (3) December 2018 (5) August 2018 (1) January 2018 (1) December 2017 (1) November 2017 (4) October 2017 (2) September 2017 (3) August 2017 (5) July 2017 (1) June 2017 (1) May 2017 (4) April 2017 (3) March 2017 (1) December 2016 (2) November 2016 (2) June 2016 (3) February 2015 (2) December 2014 (1) November 2014 (1) October 2014 (2) September 2014 (3) October 2013 (1) September 2013 (2) August 2013 (2) July 2013 (6) June 2013 (6) May 2013 (25) April 2013 (2)
Categories Select Category ၀တ္တုတို (13) 20 Facts (3) 30 Days Challenge (2) bulletin board (4) tag (5) Women’s World Journal (5) ကဗျာ (29) ခရီးသွားမှတ်တမ်း (16) ချစ်သူအတွက် (3) စာအုပ် (1) စိတ်ထဲရှိသမျှ (18) ထိုသောကြာ (2) ဘာသာပြန် (1) မစိမ်းပြာ (1) ဟိုလိုလို ဒီလိုလို (10) အမှတ်တရများ (16) အတွေးတစ်စ (17) မောင်လေး (2) ရွှေဒေါင်းတောင် (2) ကြုံရဆုံရ (6)